people Nepal » वैज्ञानिक शोध : संसारभर बढ्दैछ सेक्सप्रति अरुचि वैज्ञानिक शोध : संसारभर बढ्दैछ सेक्सप्रति अरुचि – people Nepal
वैज्ञानिक शोध : संसारभर बढ्दैछ सेक्सप्रति अरुचि
सेक्सको मामलमा अहिलेको समय मानव इतिहासमै सवैभन्दा उनमुक्त अवधि मान्न सकिन्छ । विगत चार दशक यता विकसित प्रविधिले यौन सम्बन्धलाई उन्मुक्ता दिएको छ, चाहे त्यो गर्भनिरोधक गोली होस् वा ग्रिंडर तथा टिंडर जस्ता डेटिङ एप्स । यो सवै मिलाएर यौन सम्बन्धलाई नयाँ उचाई दिन्छ ।
यति मात्र होइन सामाजिक मुल्य–मान्यताको देष्टिकोणबाट पनि समलैंगिकता, तलाक, विवाह भन्दा पहिला सेक्स सम्बन्ध र एकभन्दा धेरैसँग यौन सम्बन्ध जस्ता चलन अब धेरे नै स्वीकार्य हुन थालेको छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि अध्धयनले यस्तो बताउँछन कि पछिल्लो दशकको तुलनामा विश्वमा मानिसहरु कम सेक्स गरिरहेका छन् ।
मार्चामा अमेरिकी शोधकर्ता जोन त्वंगे, रायन शेरमान र ब्रुक वेल्सको एक शोध अध्ययन आर्काइव्स अफ सेक्सुअल विशेवियरमा प्रकाशित भएको थियो, जसका अनुसार १९९० को दशकको तुलनामा २०१० को दशकमा मानिस हरेक बर्ष नौ पटक कम सेक्स गरेका छन् । तथ्याङ्कका अनुसार यसमा १५ प्रतिशत कमी आएको छ ।
१९९० को दशकमा हरेक बर्ष मानिस ६२ पटक सेक्स गरिरहेका थिए, जो २०१० को दशमा घटेर बर्षेनी ५३ पटकमा पुगेको छ । यो कमी सवै धर्म, सवै जाती, सवै क्षेत्र, शिक्षित तथा अशिक्षित सवै किसिमका मानिसमा देखिएको छ ।
यस्तो खालको प्रवृति विश्वभर नै देखिएको छ । २०१३ मे मा नेशलन सर्वे अफ सेक्शुअल एन्ड लाइफस्टाइल नैटकसालका अनुसार १६ देखि ४४ बर्षका मानिस महिनामा पाँच पटक सेक्स गर्न थालेका थिए ।
२००० को तलनामा यो कम थियो, त्यसबेला हरेक महिना पुरुष ६ दशमलव २ पटक र महिला ६ दशमलव ३ पटक सेक्स गरेका हुन्थे ।
२०१४ मा अस्टे«लिय नेशलन सर्वे अफ सेक्शुअल एक्टिविटीका अनुसार हरेक साता मानिस एक दशमलव ४ पटक सेक्स सम्बन्ध बनाउन लाग्थे, जवकि त्यसभन्दा अगाडिका १० बर्षमा यो अनुपात १ दशमलव ८ पटक थियो ।
यो स्थिति जापानमा धेरै भयावह देखियो, जसका अनुसार १६ देखि २५ बर्षको उमेरका ४६ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत पुरुष सेक्स सम्बन्धलाई घृणा गर्न थालेका छन् ।
यस्तो किन भैरहेको छ ?
यसको कुनै कारण छैन, तर बीबीसी फ्युचरले यस विषयलाई गम्भीरता पूर्वक खोज्ने कोशिष गरेको छ ।
यसको सवैभन्दा सजिलो निश्कर्ष त यो हो कि प्रविधि उपयोग धेरै गर्नु । खास गरेर दुई प्रविधिलाई घट्दै गएको सेक्सको कारण मानिएको छ, एक अनलाइन पोर्नोग्राफी र अर्को सोसल मिडिया ।
अनलाई पोर्नोग्राफी बढदै गएको चलनबाट कैयौ मानिसमा सेक्स एडिक्शन जस्तो विरामी पनि देखिएको छ । जब तपाईं यस्तो एडिक्शनको शिकार हुनुहुन्छ पोर्नले वास्तविक जीवनको सेक्सको ठाँउ लिन्छ ।
शोधकार्तका अनुसार पोर्न हेर्ने मानिस सेक्स सम्बन्ध बनाउने मामलामा कम रुचि राख्छ । २०११ मा इटलीमा पोर्न देख्ने २८ हजार मानिसमा सर्वे गरिएको थियो, जसमा धेरैजसो मानिस पोर्न हेर्ने वानी परेको थियो ।
शोधकर्ता कार्लो फोरेस्टाका अनुसार दैनिक पोर्न हेर्नेहरु विभत्स तरिकाले सेक्स गर्न मन पराउँछन् ।
सर्वेका अनुसार, पोर्नमा देखिने काल्पनिक तस्वीरको यस्तो असर हुन्छ कि वास्तविक तरिकारले पुरुष बेडरुममा सेक्स सम्बन्धका लागि तयार नै हुँदैन ।
सन् २०१४ मा अमेरिकामा माइकल मैलकाल्म र जर्ज नाउफैलले १८ देखि ३५ बर्षका १५०० यूवामाथि सर्भे गरे, यसमा इन्टरनेटको बढ्यो प्रयोग र उनीहरुका रोमान्टिक जीवनमा पर्ने असरवारे सोधिएको थियो ।
इस्टन इकोनमिक जर्नल, मा प्रकाशित यो अध्ययनमा देखिएको थियो कि जो मानिस धेरै समयसम्म इनटरनेटको प्रयोग गर्छन्, उनीहरुमा विवाह गर्नेको दर पनि कम हुन्छ । यो दर अरु धेरै कम हुँदै जान्छ, जब पुरुष अनलाइन पोर्नोग्राफी दैनिक जसो हेर्छन् ।
पोर्नोग्राफीबाहेक सोशल मिडियाका कारण मानिस आफ्नो बेडरुममा धेरै समय बिताउन सक्दैनन् । सेक्सभन्दा धेरै मानिस मोवाइल स्क्रीनमा ध्यान दिन्छन् । यो त्यहीँ निश्कर्षको विस्तार हो, जहाँ पहिला भनिएको थियो कि, टीभीका कारण मानिसहरु कम सेक्स गरिरहेका छन् ।
सातामा कति सेक्स ?
यी दुई निश्कर्षपछि प्रश्न उठाउनु पनि जायज हो । पोर्नोग्राफीबाट यौन सम्बन्धमा पर्ने असरलाई लिएर विशेषज्ञ विभाजित छन् । कतिपय विशेषज्ञ मान्छन कि, इन्टरनेट सेक्स एडिक्शनबाट मानिसमा सेक्सप्रति रुचि अरु बढ्छ ।
२०१५ मा जर्नल सेक्शुअल मेडिसिनमा प्रकाशित एक आलेखका अनुसार एक सातामा कम भन्दा कम दुई पटक ४० मिनेटसम्म पोर्नोग्राफी हेर्नाले मानिसमा सेक्स इच्छा प्रवल हुन्छ ।
यो अध्ययन २८० पुरुषमाथि गरिएको थियो । कतिपय विशेषज्ञका अनुसार प्रति साता दुई घण्टासम्म पोर्नोग्राफी हेर्दा सेक्स गर्ने चाहना सवैभन्दा बढी हुन्छ ।
यो परिणामको शोधकर्ता त्वेंगे, शेरमान, वेल्सले पनि आफ्नो अध्ययनमा समेटेका छन् । तर, यसमा पनि अन्तिम निश्कर्ष छ, पोर्न धेरै हेर्ने बानीले मानिसको सेक्सप्रतिको रुचि कम गराउँछ ।
यही शोसल मिडियाका वारेमा पनि भन्न सकिन्छ, ग्रिंडर र टिंडर जस्ता एप्सले मानिसको सेक्स जीवनमा गति मिल्छ । यसले यूवा सेक्स सम्बन्त्र बनाउने फैसलामा चाडै पुग्छन् ।
प्रविधिको आममानिसको सेक्शुअल जीवनमा असर पर्छ नै, तर केवल यहीँ कारणबाट मानिसको सेक्स जीवन प्रभावित हुन्छ भन्ने अवस्था चाहीँ होइन ।
यसबाहेक कामको दबाबको पनि मानिसको बेडरुममा असर पर्दैछ । पश्चिमी विश्वमा औसत पूर्णकालीन कर्मचारीको अमरिकामा प्रति साता ४६ घण्टा काम गर्नुपर्छ । यसको थकान र तनावको असर मानिसको सेक्स जीवनमा पर्छ ।
तर, यो यति सहज कुरा पनि होइन । १९९८ मा जेनेट हायड, जान डिलामेटर तथा इरी हेविएटले आफ्नो अनुसन्धानमा बताएका थिए, कामको दवावले महिलामा सेक्स गर्ने इच्छामा कुनै असर हुँदैन ।
यो अध्ययन जर्नल अफ फेम्ली साइकोलोजीमा प्रकाशित भएको थियो । यसका अनुसार घरेलु महिला र काम गर्ने महिलामा सेक्स गर्ने इच्छामा कुनै फरक थिएन ।
यद्यपि त्वेंगे, शेरमान र वेल्सको अध्ययन चाहीँ ठीक उल्टो छ, किनभने नयाँ अध्ययनका अनुसार व्यस्त कामकाजी जीवनमा सेक्स लाइफ प्रभावित हुन्छ ।
कामको असर सेक्स जीवनमा हुन्छ तर यो काम गुणवत्तामा भर पर्छ । खराव नोकरीका कारण दिमागमा असर हुन्छ र यसको असर सेक्स जीवनमा देखिन्छ । सेक्स जीवन कम हुनुको मुख्य कारणमा एक तनाव पनि हो ।
यूनिवर्सिटी अफ ज्यूरिखका गाय बोडेमेनले २०१० मा एक सय तीन छात्रामाथि तीन महिनासम्म अध्धयन गरेका थिए । यस अध्ययनका अनुसार तनावका कारण सेक्समा कम रुचि देखिएको थियो । तनावले हर्मोनको स्तर गढबढ गराउँछ, ड्रग्स, मदिराको प्रयोग बढाउँछ र यी सवैको असर सेक्स सम्बन्धमा पर्छ ।
पछिल्लो केही दशमा पश्चिमी विश्वमा मानिस अवसादमा देखिन थालेका छन् । अवसादका कारण मानिसमा सेक्सप्रतिको रुचि घटछ । यस्तो खालको अध्ययन यूनिवर्सिटी अफ एलिलेडमा इजावन एटालांटिस र थामस सुलिवेनले गरेका थिएm जुन जर्नल अफ सेक्शुअल मेडिसीनमा प्रकाशित भएको थियो । यद्यपी त्वंगे, शेरमान र वेल्सका अनुसार पनि प्रसन्नता कम हुँदा सेक्स सम्बन्धमा कमी आउँछ ।
जेन त्वंगेका अनुसार आजको यूवा पिढी, नोकरीको असुरक्षा, आफ्नो घर बनाउने मुस्किल, जलवायु परिवर्तन र सांप्रादायिकताको बीचमा रहेको हुन्छ । र, यसको असर मानसिक स्वास्थ्यमा पर्छ ।
बिग्रदो सेक्स जीवन
सेक्स जीवनमा कमीका कारण खोज्न थालिएको छ । तर, तमाम निश्कर्षबाट यो संकेत मिल्छ कि आधुनिक जीवनशैलीको तनाव, कामको तनाव, असुरक्षाको बोध र प्रविधिको असरले मानिसको सेक्स जीवनलाई विगारिरहेको छ ।
कतिपय मानिस यस्तो कमीबाट खुसी पनि छन्, तर हामीले यो ध्यान दिन जरुरी छ कि सेक्स बहुतै महत्वपूर्ण छ । यसले प्रसन्नता बढाउँछ, तपाईंको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । तपाईं आफ्नो कामको दुनियाँमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । सबै मिलाएर भन्दा सेक्स रमाइलो हो ।
यही कारण हो कि विश्वभरमा मानिस यो मुद्दाबाट पार पाउनका लागि उपाय खोजिरहेका छन् । स्वीडेनमा ओवरटोरनिकका काउन्सिलम्यान पेर–इरिक मुस्कोसले यसै बर्ष फेरवरीमा नगर निगमका ५५० कर्मचारीलाई हरेक साता एक घण्टा कम काम गर्ने भनेका थिए । त्यति मात्र होइन उनले त्यो समय घरमा गएर सेक्स सम्बधका लागि प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मुस्कोस यो पनि भन्छन् कि उनको उदेश्य यो हो कि जोडी एक अर्कालाई समय दिन सकुन् । ताकी यो समस्या मल्टी बहुआयमिक समस्याको उपाय पनि बहुआयामिक तरिकाले नै खोज्न सकियोस् ।
यहीकारण हो कि पश्चिमी विश्वमा नोकरी र घरको सुरक्षा बढाउने, जलवायु परिवर्तनको खतराबाट मुक्त हुने र साम्प्रदायिकतालाई कम गर्ने विषयमा विचार बिमर्श भैरहेको छ । यसबाट मानिसको सेक्स जीवन त राम्रो हुने नै छ, साथै उनीहरुको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ